Naveed Khan: Nhau yePakistani muDaily | Ida UAE!
Naveed Khan: Nhau yePakistani muDhaibha
Mirayiridzo yevanotsvaka Jobho
Yakabudiswa na Dubai City Company at Dai 19, 2019
Naveed Khan: Nhau yePakistani muDhailand - Heino kutora hupenyu nemaoko maviri!
Naveed Khan 26th Kubvumbi 2008, pamwe zuva rakajairwa nenyanzvi dzinorarama in Pakistan and Brazil, but it was a life-changer for me. It was the day pandakabhururuka ndichienda kuAFA ndichitsvaga ramangwana riri nani.
Ndakanga ndine akawanda zviroto uye zvinangwa zvine chekuita nesarudzo yangu. Ini ndaive netariro uye ndakavimbisa kwakawanda ndichifunga nyaya dzekubudirira dzavanhu vanoshanda ipapo, tariro yese uye zvipikirwa zvinoita kunge zvechokwadi.
Yakanga iri yangu yekutanga kufamba nendege uye yanga isiri yekumusha kufamba Ini ndaienda kuzere nyika dzakasiyana vane tsika dzakasiyana, tsika nemitauro. Kwaive zororo iro chinamato chakafanana.
Kungotanga matambudziko ekuvhima basa muDhailand
Iyi imwe pfungwa yakandipa ushingi nesimba kutarisana nematambudziko anouya mubasa rokuvhima. I flew from Lahore at night and landed at midnight in Dubai. Dubai nhandare yendege was my 1st interaction with the fast-paced economy. It is said, kana mumwe munhu achida kutora pfungwa ye chero yenyika yekushanya maitiro ekushanya zvifambi zvavo zvekufambisa, Dubai Airport yakandipa uyu mukana.
Yakanga ichishamisa kuona vanhu vakasiyana-siyana uye mitauro yakawanikwa pasi pedenga remba. Uku kwaive uye kurota kwangu kuona vanhu vanobva kwakasiyana madzinza, mutauro uye chitendero vachigara murunyararo.
Ndakazoona kuti izvi chete zvaigona kuitika kana vese vakaenzana pamberi pemutemo. Hazvina mhosva kuti ndiwe ani uye zvauri kana iwe ukatyora mutemo, haugone kupunyuka. Vanhu vanogarako vangasiyana kubva kwandiri, asi kunyangwe kana vari ivo vakarurama vangani vanhu vachange vachinakidzwa nekurapwa kwakakosha pamwe pane 5% kune 10% ye UAE huwandu, kunyangwe ivo vari kune zvimwe vanozvidavirira pamberi pemutemo, asi zororo iro rinogara mumaguta uye kugadzira nzanga zvakanyatso pasi pemirairo.
Chero zvakadaro kudzokera ku nhandare yendege, Ndakaitirwa zvinyoro nyoro neakanyanya vashandi vanoenda kune dzimwe nyika uyo waive mhepo yemufaro kwandiri. Gare gare vashandi vetsika vakasarudzika. Tsvimbo dzakadai ndidzo kumeso kwese kwese nekuti ivo vari kumberi mutsetse uye pasuo renyika kuvanhu vanobva kunze, Ndakaona paine nyaya vanhu varikugadzira kukakavara asi iyo vashandi vari kuedza kuvatsanangudza zvakadzikama.
Kutarisana neAngland Airport
Chandainzwisisa icho kana urikushanda zvakanaka nevashandi ve airport vachakuitira zvakanaka, uye haungatyi kana usati waita chinhu chakaipa, chirevo ichi changu chinoratidzwa mumatanho ekupedzisira ezvinyorwa zvangu. Hanzi kuenda kune vashandi vepo ndege vari kushingairira kuita mabasa avo uye kubata kuyerera kukuru kwakadaro kwevanhu vanobva kwakasiyana tsika pasina kuvhiringidza mashandiro acho. Sezvo Dubai Airport ndeimwe yenhandare dzakabatikana kwazvo dzepasi pano dzichiri kushanda zvakanyatsonaka iri mhedzisiro yekusaneta kwevashandi vese. Dzimwe nguva ivo vanobatsira kupfuura vanhu vako.
Nzvimbo yaive panhandare nendege yaive yakasununguka zvekuti yaisandiita kuti ndinzwe mamiriro ekunze ekunze. izvo zvinowanzokura muAFA mumazuva iwayo. Ndakamirirwa nemunhu weyemhuri yandaibata. Kunyangwe zvaive pakati peusiku ini handina kukwanisa kuona kamwechete kakakora kumeso kwake paakandigamuchira kusvika kunonoka. Aifanira kufamba 139 Km kubva Abu Dhabi kunditora kubva kuDubai.
Kubva kuAbrahama Dhabi kusvika ku Dubai
Vanhu vanonyatsoziva kwete chete chinhambwe asiwo traffic. Migwagwa yeA Abu Dhabi zvakafanana zvakanyanya nyore kufamba kupfuura Dubai, nekuda kweiyo isiri-congestive uye isiri yekutengesa mararamiro. Zvisinei, murume wechidiki uya akandikwazisa nemufaro, ane mhuri yagara ikoko kwemakore. Ndakazoona pava paya kuti kuita kwake kwaive nekuda pesvedzero yeiyo UAE tsika zvekubata vaenzi izvo zvaakabatanidza nemafungiro ake. Husiku hwaidziya nekuda kwezuva rinopisa.
Takafamba munzira dze Dubai isati yaenda ku Abu Dhabi. Kutenderera zvaiitika nekuti aida kuzodya kunge munhu ane rupo aiziva chokwadi chekuti ndinacho akafamba achibva kune imwe nyika uye inofanirwa kuve nenzara mushure metsika, yekubva kune dzimwe nyika uye yekuunganidza miitiro.
Takamira padhuze pekudya uye chaizvo handiyeuke zvataidya kubva ipapo, asi chandinoyeuka ndechekuti chaive chinonaka. Munzira yekudzoka muenzi wangu akatamba mutambo wekutungamira mutambiro zvakare, anga achirevesa nezve zvemakara isu tinopfuura nepatiri. ChiCoriche, mall, dzimba dzeumambo uye shongwe pakanga paine zvakawanda kutaurira nezve Dubai kuti kunyange iyo yakareba yekufamba kure yakafukidzwa isina kubhururuka.
Hapana chakafanana nekutamba mugungwa spray.
Burj Khalifa uye Burj Dubai
He was so much proud telling me about Burj Khalifa (Then Burj Dubai) which was in its final phase of completion or finishing. Now I realize while writing this, he could have taken nzira diki inoenda kumugwagwa mukuru unoenda ku Abu Dhabi, asi pachinzvimbo chake, akatora dura kuti andiratidze hukuru uye nekubwinya kweguta. Munzira mese aingoramba achirumbidza Sheikh Zayd uyo waaimuti Baba Zayd (Kazhinji aifona naye Pakistani. Sokunge kubhadhara rukudzo kune izvi mutungamiri mukuru ndicho chikamu chehurukuro yavo.
Patakabva kuDhailand uye patakabatana muhukuru Shiekh Zayd mugwagwa inotungamira ku Abu Dhabi, ini handirangariri asi, zvaishamisa kuona nzira yemafambisi ine mota dzakakura kudaro iri mushe uye yakarongwa kuti kutyaira kuri nyore kwazvo pamugwagwa mukuru kana uchinge uri kutevedzera mutemo wetaundi. Wanga wanditungamira uye akandiudza akandiudza kuti kuwana rezinesi rekutyaira kwakanyanya kuoma kuwana. Iye amene akazviwana mukuedza kwechitatu. Izvi zvinoratidza kuti mitemo inonyatsoitwa sei mushe.
This also shows that the state cares about the safety of people and incompetent can be on the driving seat whether its vehicle or state bhizimisi. Kuratidza kufarira kwangu ndakamubvunzawo mibvunzo mizhinji, semuenzaniso, ndakaona bhiriji nembiru uye ini ndokubvunza nezvazvo, akandiudza kuti iri pasi pekugadzira njanji, chitima chinomhanya. ndeyekumhanya pane izvi munguva pfupi kubva kuDera Dubai kuenda kuJebel Ali.
Ndakashamiswa zvikuru kuona sei panguva imwe cheteyo nyika iri kushanda mumapurojekiti mega. Nzvimbo, masikisheni, nzvimbo dzekuvaraidza iwe unozvitumidza zita uye iwe uchawana kuvakwa. Pakubuda kubva kuDubai, muenzi wangu akandiratidza mugwagwa waive uchienda kuPalm Jumeirah, uye handina kuzowana mukana wekushanya. Akataura its nzvimbo inodhura zvikuru. Kwatinoona zhinji dzekuvakira veruzhinji isu tinoona vamwe vachiwana mari futi. Zvakanaka kuita mari asi mashandisiro aunoita izvozvo zvine basa uye iyo hutungamiri yeAUE ine chiratidzo chakajeka maererano neichi. Vanoziva nzira yekuwana nayo mari kubva kune vakadzidza uye vanoishandisa pashoma neruzhinji saRobin Hood asi izvi hazvina kurambidzwa J, kutaura idi, iri official.
Mitemo nemitemo mu Dubai
Kunze kwekuvakwa, iyo mamiriro ekunze zvekare. Usiku kunyarara negwenga zvaindifadza nguva dzose, uri padyo nemusiki wako panzvimbo dzakadai uye rwendo urwu rwakandipa mukana. Kuputsa mota iko hakuchawanzoitika nekuti kune mitemo yakasimba pamusoro pekusimbisa kwemotokari kana paine mota haipfuure iyo inofanirwa gore rega kwekusimba bvunzo isingawanikwe mumigwagwa, mitemo yakadaro inogara ichibatsira veruzhinji kuti vadzivise chero njodzi yekufamba. Ndichiri ipapo ndakanzwa mutemo pamusoro pevanofamba netsoka munguva pfupi kuti uitwe. J Walkers iri kuenda kunobhadhariswa mari munguva pfupi. Mumwezve mutemo wekuchengetedza ruzhinji. Uye vanhu vanoziva kana mutemo ukashandiswa unoomerera zvakanyanya.
Uku kutya kwemutemo a vimbiso yerunyararo uye yakatsiga maitiro ebhizimusi yenyika. My personal experience is not going to be covered in one Blog there is a lot to write uye zvichanyorwa mumablogs anotevera. Iyi haisati ichingo blog chete asi hupenyu hwangu chidzidzo uye ruzivo, zvandichagovera nguva nenguva. Vanhu vanogaramo vangasazvifungira zvakakomba asi kuedza kwayo kubatsira vanhu kunzwisisa UAE, zvinhu zvakawanda zvinogona kuve nazvo uye zvachinja asi musimboti ucharamba wakafanana. Zvivakwa zvinogona kuvaka nekuparadza asi vavaki vanoramba varipo uye vavaki ndivo hutungamiriri uye vanhu venyika.
Ona yose UAE Abu Dhabi, Dubai, Sharjah
Mushure mekufamba rwendo rurefu, ndakasvika kwandaienda Maroor Road Abu Dhabi. Ndakapedza vhiki yangu yekutanga ndichiona mamiriro ekunze, vanhu nenzvimbo dzakatenderedza. Chakanakisa chiitiko chaive Masaajid yenzvimbo iyo ndakazoona mune yese UAE Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Al Ain naRas Al Khaima vane zvimwe zvakavanzika zvinoyevedza. Chinhu chakanakisa icho mune zvese masajid Adhan inoverengwa panguva imwe chete. Mazwi akanaka enzvimbo dzinoyerera akapararira mumangwanani akanaka, masikati, masikati, manheru uye husiku. ChiArab se rurimi rwavo rwekuzvarwa azan inoita senge inonzwika kwazvo kutaura pasi.
Chinhu chakanaka icho Masaajid chinomhanya nehurumende saka hapana kuparidzwa kwechero ripi kana bato rezvevanhu zvinogoneka. Imam wenzvimbo masjid kwandaigara aive Iraqi, aive nemoyo munyoro uye azvininipisa. Kunyangwe ini ndisiri kunyatsoziva chiArabic asi iye akandipa hurukuro pane dzimwe nyaya dzeIslam uye Zvakandishamisa kuti kusaziva chiArabic. Ini ndanga ndichinzwisisa rimwe nerimwe izwi raaitaura kwandiri. Ini ndinofunga chaive chiIslam hama hama izvo zvakaita kuti titaure nemoyo.
Chimiro cheMasajid chaiwedzerwa kwazvo zvekuti kwakaratidza kuti kwainzi imba yaWemasimbaose. Ndakaona vana vabva kunharaunda vakauya nemabhegi avo echikoro ndokuita basa ravo remumba kuMasjid. Zvaive zvinozorodza zvekuti Masajid iri kutamba seyakaitirwa nzvimbo yenharaunda kwete kunguva dzemunamato. Iyi tsika yakakodzera kutevera munyika dzese dzeMuslim. Wakagamuchira mumwe akandiudza kuti mwedzi weRamadan mwedzi wakanaka kwazvo muAFA umo vanhu vanodurura rudo nemanzwiro avo uye nerupo, zuva rega rega reRamadan rinopemberera. I can imagine izvozvo zvaari kutaura hapana kunze kwechokwadi.
Local Area mu Dubai
Zvino kumisika, kunge zvese zvakarongwa zvimisika misika yakavakirwawo nekuronga kuzadza zvese zvakakosha zve nharaunda inogara padhuze. Vabheji, vabiki, zvitoro zvemitoro uye zvitoro zvemitambo yemavhidhiyo. Zvitoro zvese zvidiki zvinoendwa nenharaunda yeAsia kunyanya Pakistani, Indian uye Bangladeshi. Unhu hwezvikafu zvacho hwakanakisa.
Chinhu chekunakidza kwandiri yaive nzvimbo dzekutamba, ndakaona mapoka evadiki Arabhu kutamba mitambo yekupfura pamwe uye uye pamusoro pevamwe kuburikidza netiweki. Mutambo uyu waindishungurudza asi chakandishungurudza ndechekupinda kwavo mumutambo. Pavaive vachipopota muchiArabic zvaindisekesa. Chitoro chemitambo chinonyatso kushevedzera nekushevedzera kwavo, ini ndinowanzoenda kuti vanakirwe nazvo.
Ndacherechedza chimwe chinhu
Chinhu chimwe chete chandakaona icho chiri kuparara chikafu miriwo nemichero zvakanaka nekuonekwa asi nekuravira kwete zvakanaka. Icho chikonzero chinogona kunge chiri, avo havana kukwira kwevhu mukati maro. UAE chiitiko chezvese kutengeserana saka kuwanikwa kwechinhu chimwe nechimwe chinogadzirwa, chakagadzirwa kana chakasimwa pasi rose chinogona kuwanikwa zviri nyore pano uye kuva nedessert kutenderedza kukohwewa hazvisi nyore. Naizvozvo raive kuchengetedzwa chikafu chinowanikwa mumusika. Asi mhando yezvinwiwa zvakapfava, juzi, zvinhu zvemukaka zvinopfuura nepamusoro.
Oiri yemuorivhi, Khubuz, Houmous yaiita kunge chinowanzoitika chikafu chemba imwe neimwe, chikafu chine hutano uye inofananidza nharaunda segwenga seAUE. Chizvarwa chitsva chaiwedzeredzwa chakananga kuchikafu chinokurumidza Burger uye Shawarmas. Panguva iyoyo ini ndakatenga chikafu chaMcDonald chakakwana cheAED 12. Yakanga yakakodzera kutenga. Kwandiri, kana isu tichienda kunodya yakapusa AED 20 zvaive zvakakwana kuti munhu akajaire kubhadharwa pane chikafu chezuva nezuva.
Chandinoyeuka iye zvino kuti khubuz yaive yefilis 75 uye chinwiwa chinwiwa chinogona kuva cheAED 1 muA Abu Dhabi. Nekuti remberi muDubai ndapota wedzera kuzadza 25 muzvinhu zviri zviviri pandakazvitenga kuDubai. Zohrat tul Rebhanoni ndiyo yaive inonakidza kurapwa kubva kumugamuchiri, dzakasiyana siyana dzekudya dzaive dzinotapira kuravira hwaisanzwisisika. Yakanga yakawandisa asi zvakadaro yakachengetedzwa. Yakanga iri imwe yeresitoyi inotyisa mu Abu Dhabi. Ndakaudzwa kuti ine chain yayo yeresitorendi muAUE yose.
Mall iri imwe yezvakanakisa zveAUE. Kunyangwe kana iwe usiri kuda kutenga chero chinhu, ichine chimwe chinhu kwauri. Kune makinema mune chero mall ane nharaunda yakanakisa uye yakasununguka. Saka unogona kunakidzwa uye kushandisa nguva ikoko. Pane imwe nguva ndaifanira kushanyira ndege yekumahofisi kuDubai, uye ndasvika muhofisi masikati uye seakawanda emahofisi ekutengesa, aivharwa panguva iyoyo uye aizozarura zvakare masikati, ndaifanira kumirira maawa e3. Ini ndaizvibvunza kuti ko, chii Ndakapinda muMarina Mall ndikanyatsoshaya kuti nguva yaenda kupi, chakaita sedzinopenya ziso. Hapana chandakangoita ndakangomira ndakatarisa kutenderera nekubatikana kwezvakatipoteredza. Ikoko ndakaona kuti Dubai chimwe chinhu chisingagoni kuverengera mumashoko chero.
Mamiriro ekunze mumazuva iwayo Kubvumbi Abu Dhabi anokwanisa kubereka panze, mazuva ari kupisa asi munguva yemanheru mhepo yemhepo inotonhorera mamiriro ekunze pasi. Kune maNzvimbo (Muwaatin) mamiriro ekunze haisi nyaya zvachose nekuti usasiye dzimba dzavo kudzamara zuva rakwira kubva mumigwagwa.
Pfungwa yekuchengetedza uye rusununguko yakanga yakawanda kwazvo munharaunda kuti ini ndakatanga kutenderera-tenderera ndiri ndega mumazuva ma2 chete pasina kutya. Zvaiita sekunge munharaunda yangu. Kugamuchira munhu mutsva chikamu chemagariro avo.
Paruzhinji Kutakura muUAE
Kutakura mitambo yakanakisisa muUAE, nemuchovha, maveni maboss maficha ega ega aive kumusoro wecherechedzo yekureruka kwevatasva, Tekisi dzaive dzichidhura asi kana iri yemasaiti tekisi yaive nemakwikwi ehupfumi nemateki ane chero kambani, mabhasi aive akakurisa uye aine zvigaro zvakanaka uye aine mweya wakazara mweya unodikanwa zvakare nemamiriro ekunze. Vani dzaivepo dzekupfupi kwekufamba izvo zvakare zvaive zvakagadzikana. Nekuda kwemitemo yakaoma yemafambisi, zvaive zvisingawanzo kuti chero munhu akapfuura ainyunyuta nezvemota kana vashandi vemotokari.
Mumavhiki maviri emabasa angu ari pamusoro, Ndanga ndaita pfungwa dzangu kuti ndiite UAE imba yangu yechipiri. Muchikamu chinotevera, ndichave ndichinyora nezvazvo kuvhima kwangu kwebasa.
Connect with: Naveed Khan pa Linkedin
Nongedzo dzeMabasa muDubai. Boka redu rakafunga kuwedzera ruzivo rwemutauro wega wega wedu Jobs in Dubai Guides. Saka, uine izvi mupfungwa, iwe unogona ikozvino kuwana magiragi, matipi uye basa muUnited Arab Emirates nemutauro wako.